နိုက်ကလပ် တက်မှ ဂုဏ်ရှိတယ်ထင်တဲ့မမများဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ် ~ Myanmar Express
နိုက်ကလပ် တက်မှ ဂုဏ်ရှိတယ်ထင်တဲ့မမများဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်
STOMPer Alexsondra was disgusted at the sight of this guy gropingadrunk girl ataClarke Quay club. The guy only stopped when the club's bouncers stepped in. အရက်မူးနေသောမိန်းကလေးတဦးအား ကလပ်ထဲတွင် လူငယ်တမျိုးမှ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကာမဆက်ဆံပြုလုပ်နေခြင်း။ ထိုလူငယ်သည် သူ၏ချစ်သူ (သို့မဟုတ်)တွဲကနေသောသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တဖက်မိန်းကလေး အရက်အရမ်းမူးနေခြင်းအပေါ်အခွင့်ကောင်းယူကာ ပြင်ပတည်းခိုခန်းနှင့်ဟိုတယ်များသို့ပင် မသွားနိုင်တော့ပဲ နိုက်ကလပ်ထဲတွင်ကာမဆက်ဆံခြင်းများပြုလုပ်နေခဲ့သည်။ထိုအခြင်းအရာကို ကလပ်တက်နေသူများမှအမြင်မတော်သဖြင့် တာဝန်ကျလုံခြုံရေး ဘောက်ဆာများအား အကြောင်းကြားလိုက်သဖြင့် ထိုနေရာသို့ ရောက်လာကာ တားမြစ်သော်လည်း ထိုလူငယ်သည် ကာမဂုဏ်ခံစားနေသဖြင့် လုံခြုံရေး(bouncers)များ ကိုပင်ဂရုမစိုက်ပဲ ကာမဆက်လံပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့် ထိုအတွဲအား နိုက်ကလပ်၏ပြင်ပသို့ ဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ထိုဖြစ်စဉ်သည် အထက်ပါပုံထဲတွင်ပြထားသည့် အတိုင်း မိန်းကလေး၏စကပ်ကိုမပြီးကာမပြုလုပ် နေခြင်းဖြစ်သည်။မိန်းကလေးသည် အရက်မူးလွန်နေသဖြင့် လုံခြုံရေးများက ကလပ်အပြင်သို့ ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားသော်လည်း လမ်းမလျှောက်နိုင်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်သည် စည်းကမ်းရှိ လုံခြုံးရေးကောင်းသော မိန်းမပျိုလေးများအတွက်စိတ်ချရသော စင်ကာပူနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာဆိုလျှင် ငွေပေးပြီး နိုက်ကလပ်များအပေါ်ထပ်နှင့် ၂ယောက်တွဲအခန်းများကို ငွေပေးပြီး ကာမပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပေလိမ့်မည်။ နိုက်ကလပ်ထဲတွင် ပြည့်တန်ဆာများလည်းရှိသလို။ သာမာန်လူငယ်များ။ကျောင်းသားများ နှင့် ခြားသောအပျော်ရှာချင်သူများတက်မှူများရှိသော်လည်း ထိုလူများထဲတွင် အရက်ကြောင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဖိအားပေးမှုများနှင့် သူငယ်ချင်းများ၏အကျိုးတော်ဆောင်မှုများကြောင့် မိန်းကလေးများဘ၀ပျက်နေရခြင်းများသည်နေ့စဉ်နှင့်တစ်ကွဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် မိန်းကလေး၏အပျိူစင်ဘ၀သည် ထိုကဲ့သို့ သော မုဆိုးများကြားတွင် သားကောင်မဖြစ်စေရန် မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် တွေးတောချင့်ချိန်မှု များဖြင့် ထိုအန္တရာယ်များမှကင်းဝေးအောင်ရှောင်နိုင်လျှင်ပင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက မိမိကိုယ်တိုင် က ထိုဘက်တွင်စိတ်ပါသောသူဖြစ်လျှင်မူ အများသောအမျိုးကောင်းသမီးများအတွက် ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် စာနာစိတ်များမွေးနိုင်ကြပါစေ။ Stomp website မှ ဆီလျှော်သလိုဘာသာပြန်ထားပါသည်။ Myanmar Express
မအေxxိုး ကြီး သန်းထွဋ်အောင် က အစိုးရကို ရစရာမရှိအောင်ပြော ပြီး သူ့ ကိုထိတော့ မြန်မာ အိတ်ပရက် ကို တရားစွဲမယ်တဲ့ဟေ့ ။www.news-eleven.comဟားဟား သန်းထွဋ်အောင် က လူကြီး ဖြစ်ပြီး သူ့ ထိတော့ ငါးစိမ်းသည်မကြီးလို ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်နေတာကြည့်ကြ ပါအုန်း။ဒေါ်စုကို myanmar express ရေးနေတာနှစ်နဲ့ ချီနေပြီ။ သန်းထွဋ်အောင် ကိုထိမှ ကက်ကက်လန်အောင် ရန်တွေ့ တာ ဘယ်လောက် ကလေးကလားဆန်သလဲ။ ဒါလား Eleven Mediaမနေ့တစ်နေ့ က သန်းထွဋ်အောင် ကို myanmar express က ဖွင့်ချတော့မှပဲ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ သူ့ ထိတော့မှ ထုံးစံအတိုင်း သန်းထွဋ်အောင် က သူပိုင် မီဒီယာကို အသုံးချပြန်ပြီ။ထပ်ပြောလိုက်အုန်းမယ်။သန်းထွဋ်အောင်ဆိုတဲ့ ကောင် က သူ့ကိုယ်သူ မြန်မာပြည်မှာ အတော်ဆုံးဆိုပြီး ထင်နေတဲ့ ကောင်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင်သူ့ လောက်မတော်ဘူး ထင်နေတဲ့ကောင်အားကစားဂျာနယ်ကိုတောင် တစ်ပတ်တည်းကို နှစ်စောင် ခွဲထုတ်ကတည်းက ဘယ်လောက်လောဘကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်ဒီကောင်က SSC ကိစ္စတုန်းကလည်း သန်းထဋ်အောင် ကသူ့ ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ သာအောင် SSC ကို နာမည်ပျက်အောင် သူပိုင် မီဒီယာကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတယ်။အာရှတော်ဝင် ကကော ဘာထူးလဲ။ ၀န်ဆောင်မှု က စုတ်ပြတ်နေတာပဲ။SSC နဲ့ နင်လားငါလားပဲ။ အာရှတော်ဝင်အကြောင်းတစ်ခါမှ မရေးဘူး သန်းထွဋ်အောင်ရှယ်ယာပါနေလို့ အမှန်တော့ သန်းထဋ်အောင် က မြန်မာပြည်က ခရိုနီတွေထဲ က တစ်ယောက်ပဲ။ဇော်ဇော်၊ တေဇ တို့ ရဲ့ စီးပွားရေးဂွင်တွေလိုမျိုး.သန်းထွဋ်အောင်ရဲ့နောက်ကွယ် က စီးပွားရေးဂွင်ကြီးတွေ။ ငွေမည်းကိစ္စတွေ သန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ အခွန်ရှောင်မှုတွေ ဖေါ်ထုတ်ပေးပါ။သန်းထွဋ်အောင် ပိုင်ဆိုင် မှု ၊ နောက်ကွယ် က ပိုင်ဆိုင်မှု တွေ ကို စစ်ဆေးပြီး ထောင်ချသင့်တယ်။Eleven က သူသိသူတတ်ကောင်တွေလည်း စိတ္တဇဆေးရုံမြန်မြန်မပို့ သင့်တယ်။ပြည်တွင်းမှာ မီဒီယာပေါင်းများ စွာ ရှိတယ်။Eleven က ကောင်တွေ (သန်းထွဋ်အောင် က ရှေ့ဆုံး) က စောက်ကျက်သရေ အယုတ်ဆုံးပဲရိုဟင်ဂျာကိစ္စလည်း ပြည်ပမီဒီယာတွေ နဲ့ရိုက်စား ကိစ္စလုပ် ထားတော့ မပြောရဲဘူး။သတင်းထောက် ကို NLD က ဆက်ဆံပုံ ကို လည်း ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။လူလည်ကြီး ခရိုနီကြီး သန်းထွဋ်အောင် ကို တရားမ၀င် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေ ကို စစ်ဆေးပြီး တရားဥပဒေဘောင်ပြင်ပ က ပါးပါးလေးတွေ လုပ်ထားတာ တွေ့ ရင်ထောင်ချပေးပါ။သန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ အကပ် က ဘာကောင်ကြီးဆိုတာလည်း ဖေါ်ါ်ပြပေးပါ။အကပ်မရှိပဲ သန်းထွဋ်အောင်ဆိုတဲ့ ကောင်ဒီလောက်မဟောင်ရဲဘူး
I totally agree with your comment.I'm ordinary reader from Myanmar.So I read all news from every medias with my own scaning minds.My reading,thinking is not bias and would like to loyal my country.I can decide which news is bias or true or false like that.I've never seen Than Htut Aung,but I read his publishing every week.But EMG(mainly Than Htut Aung) is not like as fair and balance media for all readers.These son of bitch and his media is only voice for traitors.It's means his media look likes voice of slaves. He use propaganda tools and make yellow journalism from his pages.I'm not respect him and his media too.Also just cooperation with Thai's Nations newspaper.Infact Nations is one of the CIA's tool as well.His media can comfuse among our patrioitic Myanmar peoples and nebouring countries relation.That's while please remove him and his media as soon as possible with any ways(like his father in law CIA's methods) for our Myanmar peoples.Please remove this real crony Than Htut Aung from Myanmar media history.I 'm really hate his article yesterday.
his Boss may be Thu zar ya htarr minn tharr gyi.
22 May 2012 19:38
eleven ကကောင် ထောင်ချပေးပါ
အပေါ်က ကျက်သရေတုံးတဲ့ ငနဲက Soe win mg soe ဖေ့ဘုတ် အကောင့်နဲ့ ကောင် .. ဒီကောင်လည်း ကျယ်ကျယ် ကျယ်ကျယ်နဲ့ သူတောင်းစားက စလုံးသားခံယူထားတဲ့ကောင် .. စောက်ဖြစ်မရှိဘဲ ပြန်လာလို့ မရတော့ မြန်မာပြည် မငြိမ်မသက် ဖြစ်လေ ကြိုက်လေ ဆိုတဲ့အကောင် ၊ အမျိုးယုတ် ပါ .. ခင်ကလျာစိုးတို့ ၊ အကောင့်ပျက်သွားတဲ့ မသာမကြီး ခင်သံလွင် တို့ နဲ့ ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ ဖင်ခံ တူတူတွေပဲ ..ထွီ
BE ALERT!Than Htut Aung and his media is target to destroy country's stability,cronies business(especially Htoo,Asia World,IGE,KBZ,Aden,Ace etc,but without Max),Chinese investments and their business connection in Myanmar and also local Chinese community's business in Myanmar.But he encourage his father in law Rohingya(Khaw taw Kalar) business such as Shine,Naing,Father Land,Mother land,Brother in Law land etc,...Above all persons should strong alert to him. Also Should stop his dangerous flames before burning to all.
He's shit for country.always blame to un-educated readers.
He's shit for country. Always blame to readers.Actually he should die,Nay Win Maung shouldn't.
Rights! သန်းထွဋ်အောင် . ငပွကြီး လုပ်နေတာ။ Eleven journals တွေထုတ်နေတာ စောင်ရေ အနည်းဆုံး မရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှ သောင်းနဲ့ချီတယ်။ တစ်မျိုးကို သောင်းနဲ့ချီတာနော်။ ဂျာနယ်တွေကိုကြည့်လိုက် စောင်ရေ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ပဲ။ အခွန်ရှောင်တဲ့အထဲမှာ ဒင်းလဲထိပ်ဆုံးကပဲ။ ပြည်သူကို စေတနာရှိသလိုလိုနဲ့ သူလဲ အမြတ်ကြီးစားပါဘဲ။ အဓိက ကတော့ ကားပါမစ်တွေ ၀ယ်ပြီး ဈေးကစားနေတာလေ ။ အစိုးရက ပါမစ်တွေမလိုဘူး ဆိုတဲ့အထိလျှော့ချ ပေးလိုက်လို့ ပိုက်ဘောမိ၊ အထိနာပြီး တောင်အော် မြောက်အော် လျှောက်အော် တာ။ ဘာတဲ့ (မြတ်တော့ ၂၀၊ ၂၅။ ရှုံးတော့ ၁၀၀။ ၂၀၀) တဲ့ ။ လာလာချည်သေး ။ ငပေါ မင်း ငွေမည်းကို ငွေဖြူလုပ်ကစားနေတာ ငါတို့အချင်းချင်းပဲသိတယ်။ သဘောပေါက်။ မင်းအကြောင်းတွေ ဒီထက် ဖော်လို့ရသေးတယ် ငပွရဲ့
သူတို့ထိတော့ နာတတ်လိုက်တာဒေါက်တာလွမ်းဆွေ၊ မိုးသီး၊ ရဲရင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရကို အမြဲတမ်းစော်ကားနေတဲ့ အတိုက်ခံမီဒီယာတွေလင်းလက်ကြယ်စင်၊ ခင်ကလျာစိုး၊ ခင်ရွှန်းလဲ့ဝေ၊ ခွန်မြလှိုင် စတဲ့အွန်လိုင်းလေဖင်ခေါင်း ဒီမိုလီးစုပ်တွေကိုလည်း တရားစွဲရမယ်
6 June 2012 10:54
approval လို သ လား ... စိတ် မ ကောင်း စ ရာ ဘဲ ... ကြောက် တတ် လိုက် ကြ တာ နော် ....lol...
တိုက်41(A)၊ ၇လွှာB ၊ပုသိမ်လမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်နေတိုင်သောမြန်မာမိန်းကလေးတဉီးထံသို့ညအချိန်မတော်ကုလားတယောက်လာလာနေသည်မှာတရားဝင်ဖာခန်းကြီးဟုပင်ထင်မှတ်ရပါတယ်။ယခုအခါထိုကုလားမှာညအချိန်မတော်သာမကညနေ၊နေ့လည်ပါမကျန်လာရောက်အတူနေထိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြင်တွေ့ရပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအရာရှိများကိုသတင်းပို့သော်လည်းကုလားပေးသမျှကျွေးသမျှစားထားတော့ဘာမှအရေးယူခြင်းမရှိပါဘူး။ပေါင်းသင်းနေထိုင်သူမိန်းကလေးမှာလည်းယခုလက်ရှိနာမည်ကြီးဘော်ဒါတခုမှာစာသင်နေပါတယ်။စာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတောင်လူမျိုးမတူ၊ဘာသာမတူတဲ့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့တိတ်တိတ်ပုန်းပေါင်းသင်းနေ ထိုင်နေတာထိုမိန်းကလေးစာသင်ပေးနေတဲ့ကလေးတွေအဖို့ရင်လေးစရာပါပဲ။